फ्याक्स सूची व्यापार फ्याक्स प्रसारण संख्या खरीद गर्नुहोस् पछिल्लो मेलिiling डाटाबेस
घर » फ्याक्स सूची
भर्खरका मेलि Dat डाटाबेसले तपाईंलाई तपाईंको व्यवसाय प्रमोशनको लागि अपडेट र मान्य फ्याक्स सूची प्रदान गर्दछ। पछिल्लो मेलिiling डाटाबेसले तपाइँलाई सबै सफा र अद्यावधिक गरिएको लक्षित फ्याक्स प्रसारण सूची तपाइँको लागि प्रदान गर्दछ। तपाईं यहाँबाट आफ्नो लक्षित व्यक्ति वा देश फ्याक्स सूची खरीद गर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो फ्याक्स सूची मानव फ्याक्स मार्केटि campaigns अभियानहरू द्वारा पूर्ण रूपमा प्रमाणित छ। जे होस्, फ्याक्स प्रसारण सूचिहरूले तपाईंलाई विश्वबाट सबै स्वच्छ र सक्रिय फ्याक्स नम्बर सूची प्रदान गर्दछ। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, यदि तपाईं फ्याक्स नम्बर सूची खरीद गर्न चाहानुहुन्छ भने भर्खरको मेलि Ma डाटाबेस फ्याक्स सूचीबाट तपाईंलाई सिफारिस गरिएको हो। थप रूपमा, यदि तपाईं यहाँबाट फ्याक्स सूची खरीद गर्न सक्नुहुनेछ भने तपाईं फ्याक्स नम्बर सूचीबाट राम्रो परिणामहरू प्राप्त गर्नुहुनेछ।
भर्खरका मेलि Dat डाटाबेसले तपाईंलाई फ्याक्स प्रसारण मार्केटिंग मार्फत तपाईंको उत्पादनहरू वा सेवा बढावा दिन मद्दत गर्दछ। अन्तमा, भर्खरको मेलि Dat डाटाबेसले तपाईंलाई केवल कम्पनीको शीर्ष स्तरको व्यक्ति सम्पर्क फ्याक्स नम्बर प्रदान गर्‍यो। जस्तै कम्पनी सीईओ, सीएफओ, एकाउन्टेन्ट, एचआर प्रबन्धक, व्यवसाय मालिक, साझेदार, लगानीकर्ता, पनि तपाईंलाई पेशेवर सेवा व्यक्ति सम्पर्क फ्याक्स नम्बर सूची प्रदान गर्दछ जस्तै डाक्टरहरू, घर जग्गा एजेन्ट, फार्मेसी, नर्स, व्यवसाय मानिस आदि व्यक्ति सम्पर्क फ्याक्स कुनै सूची छैन।
व्यापार फ्याक्स प्रसारण संख्या सूची खरीद गर्नुहोस्
पछिल्लो मेलिंग डाटाबेसबाट व्यापार फ्याक्स सूची खरीद गर्नुहोस् किनकि, तपाईं यहाँ बाट मिति र सटीक फ्याक्स प्रसारण सूचीहरू प्राप्त गर्नुहुनेछ। पछिल्लो मेलिंग डाटाबेस व्यापार फ्याक्स सूचीको लागि उत्तम स्रोत हो। जहाँसम्म, यदि तपाईं b2b व्यक्ति सम्पर्क फ्याक्स सूची प्राप्त गर्न चाहानुहुन्छ भने तपाईं हाम्रो फ्याक्स प्रसारण सूचि प्याकेज हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईं सबै सक्रिय व्यापार फ्याक्स सूची प्राप्त गर्नुहुनेछ।
जब फ्याक्स कुनै नेतृत्व अन्तिम अपडेट गरिएको छ?
जहाँसम्म, प्रत्येक महिना हामी हाम्रो फ्याक्स नम्बर नेतृत्व अपडेट गर्नुहोस्। हामी अधिक स्रोतहरूबाट हाम्रो फ्याक्स सूची निर्माण गर्दछौं। त्यसैले प्रत्येक महिना फ्याक्स डाटा प्राप्त पछि, हामी अपडेट गर्छौं।
जब फ्याक्स मार्केटिंग सूची वितरित हुन्छ?
थप रूपमा, hours घण्टा भित्र अर्डर गरे पछि तपाईंको फ्याक्स नम्बर सूची डेलिभर हुनेछ र कस्टम सम्पर्क फ्याक्स नम्बर लिडहरूको लागि हामी डाटा निर्माण गर्न अधिकतम hours२ घण्टा लिन्छौं।
फ्याक्स प्रसारण सूचिकृतता के हो?
त्यस्तै, हामी तपाईंलाई 95%% शुद्धता फ्याक्स नम्बरहरू प्रदान गर्दछौं। हाम्रो सबै सम्पर्क फ्याक्स नम्बर मानव र कम्प्यूटर आँखा प्रमाणित छ।
कस्तो प्रकारको फ्याक्स मार्केटिंग सूचीहरू तपाईले प्रदान गर्नुहुन्छ?
सबै भन्दा माथि, हामी व्यापार फ्याक्स सूची पनि उपभोक्ता फ्याक्स नम्बर सूची डाटा र कम्पनी सम्पर्क व्यक्ति कम्पनी कर्मचारी शीर्षक र काम समारोह डाटा द्वारा डेटा प्रदान गर्दछौं। साथै तपाई लक्षित व्यक्तिको सम्पर्क जानकारी उद्योग वा देशले राज्य र शहर द्वारा पनि सेल फोन सूची निर्माण गर्न सक्नुहुनेछ।
यो फ्याक्स प्रसारण सूची बिक्री बिक्री ल्याउँछ?
त्यस्तै, हो हाम्रो फ्याक्स सूची छैन तपाईंको कम्पनीको लागि अधिक बन्द बिक्री नेतृत्व ल्याउँछ।
फ्याक्स मार्केटिंग सूचीहरू कुनै पनि सीआरएम प्लेटफर्ममा प्रयोग गर्छन्?
अर्को शब्दहरूमा, हो तपाई कुनै पनि सीआरएम प्लेटफर्ममा फ्याक्स मार्केटि listing लिस्टि। प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ।
त्यस पछि, हामी २०१२ बाट व्यापार गर्दैछौं। हामी फ्याक्स मार्केटिंग सूची प्रदायकका लागि सबैभन्दा ठूलो कम्पनी हौं। सबै सम्पर्क फ्याक्स नम्बर%%% सही छ। यदि तपाईंले 2012% बाउन्स फ्याक्स नम्बर प्राप्त गर्नुभयो भने हामी हाम्रो बाउन्स्ड फ्याक्स नम्बर प्रतिस्थापन गर्नेछौं। त्यो हाम्रो ग्यारेन्टी हो।
फ्याक्स मार्केटिंग सूचीहरूको लागि कस्तो ढाँचा?
त्यस्तै, हामी तपाइँलाई तपाइँको अर्डर गरिएको फ्याक्स नम्बर सूचीको लागि उत्कृष्ट वा CSV ढाँचा प्रदान गर्दछौं।
यसबाहेक, हाम्रो सबै सम्पर्क फ्याक्स सूची छैन एक अनुमति आधार हो र GDRP तयार छ।
उदाहरण को लागी, हाम्रो फ्याक्स मार्केटिंग सूची स्रोत विभिन्न प्लेटफर्म हो। हामीले विश्वसनीय साइटहरूबाट सबै फ्याक्स नम्बरहरू लियौं र स्रोत मात्र अप्ट इन गर्दछौं। हामी व्यवसाय स्रोत र उपभोक्ता स्रोतबाट फ्याक्स नम्बरहरूको सूची निर्माण गर्छौं।
जहाँसम्म, तपाईं यो फ्याक्स नम्बर सूची तपाईंको कम्पनी अनलाइन फ्याक्स मार्केटिंग वा फ्याक्स प्रसारण अभियानहरू सिर्जना गर्न प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ।
फ्याक्स नम्बर सूचिहरु फ्याक्स प्रसारण प्रयोग गर्न को लागी तयार छ?
अन्तमा, हो हाम्रो फ्याक्स नम्बर सूची फ्याक्स प्रसारण अभियान प्रयोग गर्नका लागि तयार छ। यदि तपाईं यो फ्याक्स नम्बर सूची फ्याक्स प्रसारण गर्न प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने यसलाई प्रसारण प्रणालीमा प्रयोग गर्नको लागि तयार छ।